RW Kheyre iyo Hoggaanka sare ee Ahlusunna oo u socda kulan xasaasi ah | Allmareeg Online
Home Wararka Maanta RW Kheyre iyo Hoggaanka sare ee Ahlusunna oo u socda kulan xasaasi...
Ra’iisul Wasaaraha xukuumada federaalka Soomaaliya Xasan Cali kheyre ayaa haatan xarunta Madaxtooyada Galmudug ee Magaalada Dhuusamareeb kulan kula leh Maaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaarir Cali Xasan Sh Shaakir iyaga oo ka wada hadlaya xaaladdii ugu dambeysay ee Dhuusamareeb iyo Shaqaaqadii xalay.
Kulanka oo Albaabadu ay u xiran yihiin ayaa waxaa looga hadlayaa sida ilo ku dhow labada dhinac ay xaqiijinayaan Israsaseyntii xalay dhacday magaalada Dhuusamareeb iyo sida laga yeelayo arrimahaan iyo ciddii ka dambeysay.
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda fedraalka oomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo madaxa xukuumadda Galmudug ayaa la filayaa dhinaca kalana in ay ka wadahadlaan xaaladda guud ee dhismaha maamulka Galmudug iyi sida loo dar-dargelin karo howsha socota ee maamul u samaynta.
Wararka intaas ku daraya in Israsaaseynta uu dhaawac kasoo gaaray laba Askari oo ka tirsan Ciidanka ee dowladda geysay Dhuusamareeb iyo haweeney goob ganacsi ku laheyd halkaas.
Previous articleAkhri:-Maxaa laga fahmi karaa Sheegashada Al-Shabaab ee Qaraxii Ex-Koontarol?
Next articleFaah faahin:-Duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday Gobolka Bari iyo Khasaaro…
Dhageyso:-Xukuumadda Nabad iyo Nolol oo 10 Siyaasi reer Muqdisho ah u...
Aways Geedi - April 10, 2019 0
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee hogaamiyaha ay ka yihiin Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre ayaa go’aan waxa ay ku gaartay in dalka laga...